Aluminium pastes yeaerated kongiri Vagadziri & vanotengesa - China Aluminium pastes yeaerated kongiri Fekitori
Iyo yekushandisa musimboti o ...
Aluminum upfu namatidza lihlahisoa ...
Mirayiridzo yekuchengetedza ...
Kukura kwekushandisa kwe ...
Yakagadziriswa kugadzirwa kwezvigadzirwa, ine goho regore rinosvika gumi nemashanu ematani. Kuti uwane zvinodiwa nevatengi, inogona kuchengetwa uye kutumirwa chero nguva. Kukurumidza kuendesa uye kugona kwakanyanya.
Iko kushanda kweaerated zvinhu mune aerated kongiri ndeyekuita makemikari maitiro mune iyo slurry, kusunungura gasi uye kuumba madiki uye yunifomu matema, kuti iyo aerated kongiri ine porous chimiro.
Aerated kongiri block ndeye nyowani mhando yezvinhu zvekuvakisa zvine huremu huremu, porous, thermal kuputira, yakanaka moto kuramba, nailability, sawing, planing, uye kumwe kudengenyeka kwenyika kuramba.
Iyo yekutanga aruminiyamu poda yekugadzira nzira yaive "nzira yekurova", uye ikozvino iyo bhora yekugaya nzira inonzi "yakaoma kugadzirwa" iri kushandiswa zvakanyanya.
Ichi chigadzirwa chigadzirwa chekunamatira chine chinodzivirira chinodzivirira, muchimiro chepellet inonyorova, uye ine yakakosha antioxidants uye inoparadzira aids.
Iko kukanganisa kwealuminium poda pane aerated kongiri
Chiyero chinogadzira mweya, kumhanya-mhanya kwemhepo, saizi yezvimedu, uye kusununguka kwehuremu hwealuminium poda zvine hunyanzvi pakushanda kwekongiri ine mhepo.
Iyo yekushandisa musimboti yealuminium poda peta mune aerated kongiri
Aluminium isimbi inoshanda kwazvo, inogona kugadzirisa nemvura kutsiva iyo hydrogen iri mumvura uye kugadzira alumina yakasimba